Kugadzira Glossary | Chinongedzo cheMakambani Mitemo - Gadziraproto - Gadziraproto Tech Co, Ltd.
Kune akawanda emabhizimusi mazwi ekugadzirisa kuburikidza mukugadzira. Ongorora magirosari edu netsanangudzo dzinokurumidza dzemazwi anowanzoshandiswa ekugadzira uye mazita.
Iyo yakajairwa komputa faira fomati yekuchinjana iyo CAD dhata, kazhinji kubva kuAutoCAD zvirongwa. ACIS chidimbu chinomiririra "Andy, Charles naIan's System."
Yekuwedzera kugadzira, 3D kudhinda
Inowanzo shandiswa isingachinjiki, yekuwedzera yekuwedzera (3D kudhinda) inosanganisira yeCAD modhi kana scan yechinhu chakabuditswazve, yakaturikidzana netaundi, sechinhu chinoonekwa chine mativi matatu. Stereolithography, inosarudza laser sintering, fused deposition modelling uye yakananga simbi laser sintering ndeimwe eanowanzo shandiswa ekuwedzera maitiro.
Dzimwe nguva inonzi "mhango," ndiyo hafu yeforoma iyo inowanzo gadzira kunze kwechikamu che cosmetic. Iyo A-parutivi kazhinji haina inofamba zvikamu zvakavakirwa mukati mayo.
Iri igomba rinoenderana neiyo axis yekuchinja kwechikamu chakatendeuka, asi hachidi kuve chakanangana nacho.
Chinhu cheiyo jekiseni-yekuumba muchina umo resin pellets inonyungudika, kumanikidzwa uye kujowa muforoma's mumhanyi system.
Uchishandisa abrasives mune yakamanikidzwa mhepo kuputika kugadzira iyo yepamusoro mameseji pane iyo chikamu.
Iyo inozivikanwawo se "chamfer," iri kona yakatetepa yakatetepa.
Kukanganisa kwekushongedza uko kunogadzirwa uko kubaya resini muchikamu, kazhinji kuchionekwa sekutsvukirira kwakatsvuka pachikamu chakapedzwa panzvimbo yegedhi.
Yakasimudzwa situdi fosi iyo inoshandiswa kubatanidza zvekusunga kana ekutsigira maficha ezvimwe zvikamu zvinopfuura nepakati pavo.
Chidimbu chenguva pfupi kana chenguva pfupi chakagadzirwa nechinangwa chekugadzira zvikamu zvekugadzira kusvikira iyo yakakwira-vhoriyamu yekugadzira muforoma yagadzirira.
Dzimwe nguva inonzi "musimboti," ndiyo hafu yeforoma panowanikwa ejectors, padivi-chiito cams uye zvimwe zvinhu zvakaoma zvinowanikwa. Pachikamu chekuzora, iyo B-divi inowanzo gadzira mukati mechikamu.
Nheyo yekutsigira pamushini wekuwedzera panogadzirwa zvikamu. Ukuru hwekuvaka saizi yechikamu kunoenderana nesaizi yemuchina wekuvaka chikuva. Kazhinji kacho chikuva chekuvaka chinogadzika dzinoverengeka dzakasiyana zvikamu zveakasiyana mageometri.
Chinhu chinowanikwa muforoma ine undercut. Kuti ibudise chikamu, chinofanira kukotama kana kutambanudza chakatenderedza pasi pemukati.
Chikamu cheforoma icho chinosundidzirwa munzvimbo yacho sezvo chakuvhe ichivhara, uchishandisa cam-actuated slide. Kazhinji, zviito zvemudivi zvinoshandiswa kugadzirisa yepasi, kana dzimwe nguva kubvumira isina kunyorwa yekunze madziro. Sezvo chakuvhe chinovhura, chikamu chedivi chinodhonza kubva pachikamu, chichibvumira kuti chikamu chiburitswe. Iyo zvakare inonzi "yeparutivi-chiito."
Iko kushomeka pakati peA-divi uye B-divi iro rakazadzwa kuti riite iyo jekiseni-rakaumbwa chikamu. Iyo A-padivi yeiyo mold dzimwe nguva inonzi mhango.
Iyo inozivikanwa zvakare se "bevel," iri kona yakatetepa yakatetepa.
Simba rinodikanwa kubata chakuvhe chakavharwa kuitira kuti resini irege kupukunyuka panguva yejekiseni. Inoyerwa mumatani, senge mu "isu tine 700 ton yekudhinda."
Ejector pini ine magumo akaumbwa kuti aenzane neinotsvedza pamusoro pechikamu.
Chikamu cheforoma chinopinda mukati mehombodo kuti chigadzire mukati mechikamu chine mhango. Makore anowanzo kuwanikwa pane B-parutivi rweforoma, nekudaro, iyo B-divi dzimwe nguva inonzi yepakati.
Chinhu chakatsiga muforoma inogadzira kushomeka muchikamu. Zvinowanzo kuve nyore kumashini wepini pini sechinhu chakaparadzana uye wobva wawedzera kune A-divi kana B-parutivi sezvazvinodiwa. Simbi yepini pini dzimwe nguva inoshandiswa mualuminium molds kuti igadzire yakareba, yakatetepa macores angave asina kusimba zvakanyanya kana akagadzirwa kunze kwehuwandu hwakawanda aruminiyamu yeforoma.
Izwi rinoshandiswa kurondedzera chakuumbwa chakagadzirwa nekukwikwidzana A-divi uye B-parutivi muforoma mahafu.
Iyo nguva inotora kugadzira chikamu chimwe kusanganisira kuvhara kweforoma, jekiseni resin, kusimbiswa kwechikamu, kuvhurwa kweforoma uye kubviswa kwechikamu.
Tungamira simbi laser sintering (DMLS)
DMLS inoshandisa fiber laser system iyo inokwevera pamusoro penzvimbo yeatomized simbi yeupfu, ichisanganisa iyo poda kuita yakasimba. Mushure mega roga roga, banga rinowedzera nyowani furawa uye rinodzokorora maitiro kusvikira chikamu chekupedzisira chesimbi chaumbwa.
Iwo mafambiro eforoma nzvimbo inofamba pavanenge vachifamba kubva pachikamu chemukati, kungave kana chakuvhe chikavhura kana kana chikamu chikasiya.
Taper inoiswa kumeso kwechikamu chinovatadzisa kubva pakuenzana nekufamba kwekuvhurwa kweforoma. Izvi zvinoita kuti chikamu chisakanganiswe nekuda kwekukwenywa sezvo chikamu chakadzingwa kubva muforoma.
Mapurasitiki mazhinji anonwisa mvura uye anofanirwa kuomeswa jekiseni kuumba kuti aone zvakanaka zvigadzirwa uye hunhu.
Chiyero chekuoma kwechinhu. Inoyerwa pachiyero kubva pane yakaderera (yakapfava) kusvika pakakwirira (yakaoma).
Kuvhura kwakanangana netambo yekuparadzanisa yeforoma uko resin inoyerera ichipinda mugomba. Egedhi magedhi anowanzoiswa pamucheto wekunze kwechikamu.
Kubuda kwemagetsi machine. Nzira yekuumba iyo inogona kugadzira yakareba, yakatetepa mbabvu pane yekugaya, zvinyorwa pamusoro pembabvu uye mativi ekunze mativi emativi.
Chikamu chekupedzisira chejekiseni-yekuumba maitiro apo chikamu chakapedzwa chinosundidzirwa kubva muforoma uchishandisa mapini kana mamwe maitiro.
Pini dzakaiswa muB-padivi peforoma iyo inosunda chikamu chibve muforoma kana chikamu chadzora zvakakwana.
Zvakawanda sei izvo zvinhu zvinogona kutambanudza kana kukanganisa usati waputsa. Iyi chivakwa cheLSR inobvumidza zvimwe zvikamu zvakaoma kuti zvibviswe zvinoshamisa kubva muforoma. Semuenzaniso, LR 3003/50 ine kukwirisa panguva yekuzorora kwe480 muzana.
Chokucheka chishandiso chinoshandiswa kugadzira muchina weforoma.
Electro static kubuda. Simba remagetsi rinogona kuda kudzivirira mune kumwe kunyorera. Mamwe mamakisi akakosha epurasitiki anoshanda nemagetsi kana kudzora uye anobatsira kudzivirira ESD
Chiumbwa panodimburwa kanopfuura kamwechete muforoma kubvumira kuti zvikamu zvakagadzirwa zvakafanana zviumbwe mukutenderera kumwe. Kazhinji, mhango imwe neimwe inoumba chikamu chakasiyana nhamba. Onawo "yakawanda-mhango muforoma."
Chiso chakakombama panosangana rumbabvu nemadziro, chakagadzirirwa kugadzirisa kuyerera kwezvinhu uye kubvisa kushushikana kwekushushikana pane chakapedzwa chikamu.
Rumwe rudzi rwekurapa kwepamusoro kunoiswa kune vamwe kana kumeso kwese kwechikamu. Mushonga uyu unogona kutangira pane wakatsetseka, wakakwenenzverwa kumugumo kuenda kune yakasarudzika pateni iyo inogona kuvharidzira pamusoro pekusakwana uye kugadzira irinani rinotaridzika kana nani kunzwa chikamu.
Iyo resin yakagadzirirwa kusagadzikana kupisa
Resin inodonha ikaita mukaha wakanaka mumitsara yekuparadzanisa yeforoma kuti igadzire isina kudikanwa nhete yepurasitiki kana yemvura silicone rabha.
Zviratidzo zvinoonekwa pachikamu chakapedzwa chinoratidza kuyerera kwepurasitiki mukati meforoma kusati kwasimbiswa.
Resini kana chakuvhuvhu kuburitsa pfapfaidzo iyo inogamuchirwa kuti ishandiswe mukugadzirwa kwezvikamu zvinozobata chikafu mukushandisa kwavo.
Iine FDM, tambo coil yezvinhu inoburitswa kubva kumusoro wekudhinda kuita akateedzana-chikamu chikamu chakaomarara kuita mativi-matatu.
Izwi rakajairika rechikamu chemuumbi umo resin inopinda muforoma mhango.
Girazi-rizere. Izvi zvinoreva resin ine girazi tambo yakasanganiswa mukati mayo. Girazi-rakazara-resini rakasimba uye rakaomarara kupfuura rinoenderana risinga zadziswe resini, asi zvakare zvakare akapwanyika.
Rumbabvu rwetatatu runosimbisa nzvimbo dzakaita semadziro kusvika pasi kana bhosi pasi.
Hot tip gate
Gedhi rakakosha rinobaya iro resin kumeso pane A-parutivi rweforoma. Rudzi urwu rwegedhi harudi kuti mumhanyi kana sprue.
Pakutanga Graphics Exchange Rondedzero. Iyo yakajairika fomati fomati yekuchinjana data reCAD. Protolabs inogona kushandisa IGES yakasimba kana epamusoro mafaera kugadzira zvigadzirwa zvakaumbwa.
Chiito chekumanikidza resin yakanyungudutswa muforoma kuti igadzire chikamu.
Chikamu cheforoma icho chinoiswa zvachose mushure mekugadzira chigadziko chemuforoma, kana kwechinguva pakati pezvikamu zveforoma.
Kuyerera mamakisi kunokonzerwa neine resin inopinda muforoma nekumhanya, kazhinji kunoitika padyo negedhi.
Iyo inozivikanwa zvakare se "tambo tambo" kana "weld mitsara," uye kana akawanda magedhi aripo, "meld mitsara." Uku kusakwana muchikamu uko kuyerera kwakapatsanuka kwezvinhu zvinotonhorera kunosangana uye kujoina, kazhinji zvichikonzeresa zvisungo zvisina kukwana uye / kana tambo inoonekwa.
Iyo chaiyo ukobvu yeiyo imwe yekuwedzera dura iyo inogona kusvika sediki semamirioni akaonda. Kazhinji, zvikamu zvinenge zviine zviuru zvezvikamu.
Liquid jekiseni kuumbwa, inova nzira inoshandiswa mukuumba kwemvura silicone rabha.
Mill-senge machining zviito mune lathe uko chinotenderera chishandiso chinobvisa zvinhu kubva kudura. Izvi zvinobvumidza kugadzirwa kwemaficha senge mafurati, maburi, masiketi, uye axial kana radial maburi kuti agadzirwe mukati me lathe.
Chikamu chakatetepa chepurasitiki chinoshandiswa kubatanidza zvikamu zviviri nekuzvichengeta pamwe chete uchivabvumira kuvhura nekuvhara. Ivo vanoda kungwarira dhizaini uye kuiswa kwegedhi. Chaizvoizvo kunyorera kungave kuri kumusoro uye pasi pebhokisi.
Liquid silicone rabha.
Resin iyo inogona kuve yakakodzera kuti ishandiswe mune mamwe marapirwo ekushandisa.
Inoitika kana magedhi mazhinji aripo. Uku kusakwana muchikamu uko kuyerera kwakapatsanuka kwezvinhu zvinotonhorera kunosangana uye kujoina, kazhinji zvichikonzeresa zvisungo zvisina kukwana uye / kana tambo inoonekwa.
Shanduko kuchikamu dhizaini inoda chete kubviswa kwesimbi kubva muforoma kuburitsa iyo inodiwa geometry. Kazhinji inonyanya kukosha kana chikamu dhizaini chashandurwa mushure mekugadzirwa kweforoma, nekuti ipapo chakuvhuvhu chinogona kuchinjwa kwete kunyatso gadziriswazve. Inowanzonzi "simbi yakachengeteka."
Mould kuburitsa pfapfaidzo
Mvura inoiswa muforoma se spray kuti igone kuburitsa zvikamu kubva kudivi reB. Iyo inowanzo shandiswa kana zvikamu zvacho zvakaoma kuburitsa nekuti vari kunamatira kuforoma.
Iyo furu iyo inodarika imwe mhango inochekwa muforoma kubvumira kuti zvikamu zvakawanda zviumbwe mune imwechete kutenderera. Kazhinji, kana muforoma unonzi "yakawanda-mhango," mhango dzose dzakaenzana chikamu nhamba. Onawo “muforoma yemhuri.”
Chimiro chekupedzisira chaunoda chechikamu; kana chimiro chisingade chekuwedzera mashandiro ekushandisa usati washandiswa.
Iyo tapered inokodzera kumagumo kwebhagi yeiyo jekiseni-yekuumba muchina uko iyo resin inopinda mu sprue.
Iri igomba rinotarisisa kune axis yekuchinja kwechikamu chakatendeuka. Ingori gomba kumucheto kwechikamu uye pakati.
Huru hwezvinhu kure nechikamu, kazhinji pakupera kwekuzadza, kwakabatana nechitete chemuchinjikwa. Kufashukira kunowedzerwa kunatsiridza chikamu chemhando uye kunobviswa seyechipiri kushanda.
Iyo tsika yekushandisa yakawedzera kumanikidza kana jekiseni chikamu kumanikidza mamwe mapurasitiki muforoma. Izvi zvinowanzo shandiswa kurwisa sink kana kuzadza matambudziko, asi zvakare zvinowedzera mukana wekupenya uye zvinogona kukonzera kuti chikamu chinamatire mukati meforoma.
Faira fomati yekuchinjana data reCAD.
Chikamu A / Chikamu B
LSR chikamu chemaviri-chikamu; izvi zvinochengetwa zvakaparadzaniswa kusvikira danho rekuumba reLSR ratanga.
Pamupendero wechikamu panogadzikana chiganda.
Iyo yekuisa muforoma inoramba yakanamatira pachikamu chakabuditswa uye inofanirwa kuburitswa kunze kwechikamu ichi yoiswa zvakare muforoma pamberi peanotevera kutenderera.
PolyJet ndeye 3D yekudhinda maitiro uko madonhwe madiki emvura photopolymer anosaswa kubva kumajeti mazhinji kuenda kune yekuvaka chikuva uye kurapwa mune zvidimbu izvo zvinoumba elastomeric zvikamu.
Undesired voids inosanganisirwa muchikamu. Ruregerero runogona kuratidzira mumazhinji saizi uye maumbirwo kubva kune akawanda zvikonzero. Kazhinji, chikamu chine porous chinenge chisina kusimba pane chakazara dense chikamu.
Gedhi rakasarudzika rinoshandisa gomba iro pini ye ejector inopfuura nepakati kuti irove resini muforoma mhango. Izvi zvinosiya positi vestige iyo inowanzo inoda kudimburwa.
Jekiseni Kuumbwa muchina.
Iri igomba rakagadzirwa nehupenyu hwekushandisa iyo inoenderana neiyo axis yekuchinja kwechikamu chakashandurwa, uye inogona kutariswa segomba repadivi. Iyo yepakati mutsetse wemakomba aya haadiwe kuti ayananise iyo axis yechimurenga.
Mupendero kana vertex iyo yakatenderedzwa. Kazhinji, izvi zvinoitika pachidimbu mageometri semhedzisiro mhedzisiro yeProtolabs 'yekugaya maitiro. Kana nharaunda ikawedzerwa nemaune kumucheto pane chimwe chikamu, inonzi inonzi fillet.
Iyo hydraulic mashini inosundira iyo yekumberi mberi mudhiramu uye inomanikidza resin kupinda muforoma.
Iyo induction muchikamu chepurasitiki chinokonzerwa nemhedzisiro yeejector pini.
Inoreva kumisikidza resini ine mafiringi akawedzerwa kusimba. Ivo vanonyanya kutapurwa neiyo warp nekuti iyo fiber maitiro inowanzo tevera kuyerera kuyerera mitsara, zvichikonzera asymmetric kushushikana. Aya ma resini anowanzo kuomarara uye akasimba asi zvakare anopwanyika (semuenzaniso, mashoma kuomarara).
Zita rakajairika remakemikari makemikari ayo, kana akajowa, anoumba chikamu chepurasitiki. Dzimwe nguva dzinongodaidzwa kuti “plastiki.”
Iyo nhanho yezvinyorwa zvakadhindwa zvinowanikwa pazvikamu zvakavakirwa kuburikidza nekuwedzera kwekugadzira. Maitiro senge stereolithography uye akananga simbi laser sintering inobvumidza yakagadziriswa zvakanyanya resolution ine idiki diki yezvinhu.
Chinhu chakatetepa, chakaita semadziro chinoenderana neforoma yekuvhura nzira, inozivikanwa pazvikamu zvepurasitiki uye yaishandiswa kuwedzera rutsigiro kumadziro kana maboss.
Chiteshi chine resin chinopfuura nepakati kubva ku sprue kuenda kugedhi / s. Kazhinji, vamhanyi vanofananidzwa ne, uye zviri mukati, nzvimbo dzekuparadzanisa dzeforoma.
Chigadzirwa chiri mudhiramu chinogadzira mapellets emabhureki kumanikidza nekunyungudutsa pamberi pejekiseni.
Kusarudza laser sintering (SLS)
Munguva yeSLS maitiro, CO2 laser inodhonzera pamubhedha unopisa weiyo thermoplastic powder, uko isinganetsi sinters (fuse) iyo poda kuti ive yakasimba. Mushure mega roga riya, chinotenderera chinoisa hwatsva hwehupfu pamusoro pemubhedha uye maitiro acho anodzokorora.
Iko simba riri pakati pezvikamu zve resin pavanenge vachitsvedza vachipesana kana pamusoro pechiso. Iko kukakavadzana kunoguma kunokonzera kumwe kupisa kweiyo resin.
Chikamu chakange chisina kuzadzwa zvizere nebwe, zvichikonzera mafupi kana kushayikwa maficha.
Iko shanduko muhukuru hwechikamu sezvainotonhora panguva yekuumba maitiro. Izvi zvinotarisirwa zvichibva pazvinhu zvinogadzirwa nemugadziri uye zvakavakirwa muforoma dhizaini isati yagadzirwa.
Chinhu chinoumba chemukati-chegomba mune chimwe chikamu nekuunza iyo A-parutivi uye B-divi mukubatana, ichidzivirira kuyerera kwesimbi kupinda-kuburikidza-gomba.
Chikamu cheforoma icho chinosundidzirwa munzvimbo yacho sezvo chakuvhe ichivhara, uchishandisa cam-actuated slide. Kazhinji, padivi-zviito zvinoshandiswa kugadzirisa yepasi, kana dzimwe nguva kubvumira isina kunyorwa yekunze madziro. Sezvo chakuvhe chinovhura, chikamu chedivi chinodhonza kubva pachikamu, chichibvumira kuti chikamu chiburitswe. Inonziwo "cam."
Dimples kana kumwe kukanganisa mumusoro chechikamu senzvimbo dzakasiyana dzechikamu chinotonhorera pamitengo yakasiyana. Izvi zvinowanzo kuve zvichikonzerwa nekuwandisa kwezvinhu ukobvu.
Yakatsvuka, inoonekwa mitsara muchikamu, inowanzo kukonzerwa nehunyoro muresini.
Chikamu chekutanga mune resin yekuparadzira system, uko iro resin inopinda muforoma. Iyo sprue inotaridzika kumeso ekuparadzanisa eforoma uye inounza resin kune vamhanyi, ayo anowanzo ari munzvimbo dzekuparadzanisa dzeforoma.
Pini ye cylindrical yekumisikidza yakakwira-chimiro-chiyero, maburi madiki-dhayamita muchikamu. Pini yesimbi yakasimba zvekuti inogona kubata kushushikana kwekubviswa uye pamusoro payo panotsvedzerera zvakakwana kuti isunungure zvakachena kubva muchikamu chisina kunyorwa.
Iyo inozivikanwa zvakare se "simbi yakachengeteka" (iyo yakasarudzika izwi kana uchishanda nealuminium molds). Izvi zvinoreva shanduko kuchikamu dhizaini inoda chete kubviswa kwesimbi kubva muforoma kuburitsa iyo inodiwa geometry. Kazhinji inonyanya kukosha kana chikamu dhizaini chashandurwa mushure mekugadzirwa kweforoma, nekuti ipapo chakuvhuvhu chinogona kuchinjwa kwete kunyatso gadziriswazve.
Inomira paChiyero cheKuchinjaniswa kweChigadzirwa Model Dhata. Iyo fomati yakajairika yekuchinjana dhata reCAD.
SL inoshandisa ultraviolet laser yakatarisa kune diki poindi yekukwevera pamusoro pechinhu chemvura thermoset resin. Kwazvinodhonza, mvura yacho inoshanduka ikaita yakasimba. Izvi zvinodzokororwa mutete, maviri-mativi emuchinjikwa-akaturikidzana kuita mativi akaomarara mativi-matatu.
Dambudziko panguva yechikamu chekubvisa kwekuumba, panogarwa chikamu mune imwe kana imwe hafu yeforoma, zvichiita kuti kubvisa kuome. Iyi inyaya yakajairika kana chikamu chacho chisina kugadzirwa nechinyorwa chakakwana.
Iyo inozivikanwa zvakare se "weld tambo" kana "dzakarukwa mitsara," uye kana akawanda magedhi aripo, "meld mitsara." Uku kusakwana muchikamu uko kuyerera kwakapatsanuka kwezvinhu zvinotonhorera kunosangana uye kujoina, kazhinji zvichikonzeresa zvisungo zvisina kukwana uye / kana tambo inoonekwa.
Pakutanga yakamirira "STereoLithography." Iyo fomati yakajairika yekutumira data reCAD kumachina ekukurumidza prototyping uye haina kukodzera jekiseni kuumbwa.
Chiumbwa chinoshandisa mahafu maviri chete kugadzira mhango iyo irin jekiseni mukati. Kazhinji, izwi iri rinoreva zviumbwa zvisina divi-zviito kana zvimwe zvakakosha zvinoshandiswa kugadzirisa pasi.
Kuvhura kwakanangana netambo yekuparadzanisa yeforoma uko resin inoyerera ichipinda mugomba. Aya anotumidzwawo se “makomba-masuo” uye anowanzoiswa kumucheto kwekunze kwechikamu.
Chinhu chinowedzerwa muforoma icho chinobviswa kubva muchikamu mushure mekuumbwa kuti chibatsire mukugadzira inopenya mugumo pachikamu. Izvi zvinowanzoitwa pamwe chete nekufashukira kugadzirisa chikamu chekupedzisira mhando.
Gedhi rakatemwa kuburikidza nemuviri wedivi rerudzi kugadzira suwo risingasiye mucherechedzo kumeso kwekunze kwechikamu.
Panguva yekutendeuka, tsvimbo yemashini inotenderedzwa mumuchina we lathe nepo chishandiso chakabatwa chakatarisana nesitoko kubvisa zvinhu uye kugadzira chikamu che cylindrical.
Chikamu chechikamu chinovharidzira chimwe chikamu chechikamu, chichigadzira kupindirana pakati pechikamu uye chimwe kana zvese zviri zviviri zvehafu hafu. Muenzaniso igomba rakanangana neforoma yekuvhura nhungamiro yakaboorwa kudivi rechikamu. Undercut inodzivirira chikamu kubva kuburitswa, kana fomu kubva pakuvhura, kana zvese zviri zviviri.
Chinhu chidiki kwazvo (0.001 mukati. Kusvika ku 0.005 mukati.) Kuvhura muforoma mhango, kazhinji pa shutoff pamusoro kana kuburikidza ne ejector pini tunnel, iyo inoshandiswa kurega mweya kupukunyuka kubva muforoma apo resini iri kujowa.
Mushure mekuumbwa, iyo yepurasitiki mumhanyi system (kana iri nyaya inopisa hot gate, kadiki dimple yepurasitiki) inoramba yakabatana nechikamu chiri panzvimbo yegedhi / s. Mushure mekunge mumhanyi adimburwa (kana iyo inopisa tip dimple yakagurwa), kusakwana kudiki kunodaidzwa kunzi "vestige" kunosara pachikamu.
Izwi rakajairika kumeso kwechikamu chine mhango. Kubatana mukukora kwemadziro kwakakosha.
Kukombama kana kukombama kwechikamu icho pachinotonhora icho chinobva mukushushikana sezvikamu zvakasiyana zvechikamu zvinotonhorera uye zvinoderera pamitengo yakasiyana. Zvikamu zvakagadzirwa uchishandisa ma resini akazadzwa anogona zvakare kuruka nekuda kwenzira iyo mafiringi anoenderana panguva yekuyerera kwebwe. Mafiripi anowanzodzikira pamitengo yakasiyana pane iyo matrix resin, uye dzakagadziriswa tambo dzinogona kuunza anisotropic kushungurudzika.
Iyo inozivikanwa zvakare se "tambo tambo" kana "dzakarukwa mitsara," uye kana akawanda magedhi aripo, "meld mitsara." Uku kusakwana muchikamu uko kuyerera kwakapatsanuka kwezvinhu zvinotonhorera kunosangana uye kujoina, kazhinji zvichikonzeresa zvisungo zvisina kukwana uye / kana tambo inoonekwa.
Rudzi rweCAD modhi inosanganisira chete mitsara uye makakombama, mu2D kana 3D. Wirefame modhi haina kukodzera kukurumidza jekiseni kuumbwa.
Cnc Kuchengetedza, Kukurumidza Prototyping, Inokurumidza Prototyping Uye Kugadzira, Kurumidza Prototyping, Cnc Rapid Prototyping, 3d Kudhinda & Rapid Prototyping Services,